Laacib Brazil kula guuleystay koobka adduunka oo u tartamaya Guddoomiyaha Gobolka Rio De janeiro | Gooldhalin
Laacib Brazil kula guuleystay koobka adduunka oo u tartamaya Guddoomiyaha Gobolka Rio De janeiro
Xiddigii hore ee kubadda Cagta Barazil Romario de Soouza ayaa hardan ugu jira sidii uu u noqon lahaa guddoomiyaha gobolka Riyo de Jeneeriyo ee dalka Baraziil.
Xiddigii hore ee kubadda Cagta Barazil Romariyo de Souza oo senator ka ah Barazil ayaa dadaal ugu jira sidii uu doorasho ugu geli lahaa guddoomiyaha gobolka Riyo de Jeneeriyo, taasoo dhici doonta bisha Oktoobar.
Romariyo oo si wayn loogu xusuusto ku guulaysiga Koobkii kubadda Cagta Adduunka ee dhacay 1994, ayaa sheegay in uu ku han wayn yahay sidii uu noqon lahaa guddoomiyaha gobolka Riyo de Jeneeriyo, isagoo xusay in uu wax wayn ka qaban doono dhibaatooyinka hareeyay gobolkaasi oo ay ugu daran yihiin gacan-ka-hadalka iyo dhaqaale xumida.
Romariyo oo ay da’diisu tahay 52 ayaa Sabtidii sheegay in loo baahan yahay is-bedel deg-deg ah oo ka dhaca Riyo de Jeneeriyo, isagoo tilmaamay in gobolkaasi uu u baahan yahay xasilooni lagu soo dabbaalo.
Romariyo, ciyaartoygii hore ee Barazil oo haatan ah senator ayaa lagu amaanaa dadaaladii uu u galay sidii loo dhamayn lahaa musuq-maasuqa hareeyay kubadda Cagta Barazil.